Kutumira mameseji Kutumira paSimba! | Martech Zone
Kutumira mameseji Kutumira paSimba!
Mugovera, Chivabvu 3, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wirefly nguva pfupi yadarika akaita ongororo yevanoshandisa nharembozha uye akaona kuti 64% yevashandisi venhare havashandise mameseji. Pandaive ndichiongorora ichi chinyorwa, ndakashamisika kuti mashoma masosi aive akakatyamadza nokuda nhamba.
Zvichida ini ndiri mushandi wekare pane vamwe vema blogger vakapindura, asi ini ndakazoshamisika nechikonzero chakapesana. Ini ndakashamisika kuti 65% yevashandisi chaizvo akaita shandisa mameseji. Pamwe zviri kungoti ini ndashandura makore makumi mana ekuberekwa asi… chaizvo? Zvakafanana nekuvhunduka kuti makumi matatu kubva muzana evashandisi vefoni havana kumboshandisa iwo telegraph muchina.
Peresenti yevashandisi vefoni mbozhanhare havatumire mameseji nekuti vakafunga kuti vanogona chaizvo taura mubhokisi riya diki rinobatsira nguva chaiyo nemunhu kune rimwe divi. Uye havafanirwe kukwenya zvigumwe zvavo kuti vadaro. Ehezve, kutumira mameseji kunogona kuuya zvinobatsira kana iwe uchida kuputsa nemumwe munhu asi usingade kutaura chaiko kwavari.
Ndiri kunyomba hongu, ndinoda kutumira mameseji. Vana vangu vanotumira mameseji kushamwari dzavo nekusingaperi uye ndinotenda kana vachinditumira mameseji musangano kwete kundifonera. Kutumira mameseji kwakanyanya kushomeka uye zviri nyore ipapo. Uye iri kuwedzera.
Mabhizimusi anga achinetseka nezvokuita nharembozha kwechinguva ikozvino. Iyo buzz muindasitiri yebasa rekudya ndeyekuti vateereri vanoteerera sei kune mameseji-akavakirwa makuponi uye chenjedzo. Ndakasangana naAdam Small, Mutungamiri we Zvinyorwa neKukumbira, mangwanani ano naAdamu vakanyora nhetembo pazvinhu zvinonyanya kunakidza zviri kuuya pasi pombi.
Rugwaro neChikumbiro rwatove nekumwe kunonakidza kwekushandisa nhare. Mumwe wavo ari kupa vashandisi veMarathon yavo-yekupedzisira-nguva nekuita kuti vanyorwe munhamba yavo yekunyora. Hapana chikonzero chekumirira kusvikira iwe wasvika kumba kuti utarise iyo nguva kumusoro kwePC yako!
Adam akaenderera mberi achitsanangura maSMS vs. MMS. Kupi SMS (Pfupi Meseji Sevhisi) inobvumidza mavara zana nemakumi matanhatu ezvinyorwa kutumirwa neseri, Mms (Multimedia Messaging Service) inobvumira mifananidzo, vhidhiyo uye kurira kutumirwa kumashure nekunze.
Sevashandi veMafoni vanoramba vachisimudzira maratidziro avo kumhanya (semuenzaniso 3g, yakashandurwa = chizvarwa chechitatu) uye nhare mbozha dzinoramba dzichisimudzira masikirini nezvisarudzo zvepamusoro, izvi zvinogona kuzarura musika!
Panzvimbo pekutumira meseji ku pusha hove pakudya kwemasikati, pamwe unogona kutumira vhidhiyo ipfupi kubva kuna maneja pabasa kana vhidhiyo huru yedhiza pachayo! Iwe unogona zvakare kupfuudza coupon yakagadziriswa uchishandisa yazvino mu barcode matekinoroji kuitira kuti mutengesi agone kungozunguzira muverengi pamberi pefoni kudzikinura coupon.
Adam akagovana humwe hunyanzvi hwekuwedzera neni kuti ini handina mvumo yekugovana pano (zvakadaro), asi ndiri kutarisira kuona nekushandisa.
Kutumira mameseji kunofanira kuve Mahara here?
Ndakabvunza Adam kana aifunga kuti mitengo ichachinja pakutumira mameseji muno muUnited States (kutumira mameseji mhiri kwemakungwa kazhinji kunenge kuri mahara) uye akati haatarisiri kudaro. Kutarisa kumwe chete kuwanda kwe spam mubhokisi rako rekunyora kunotsanangura kuti sei… kana kutumira mameseji kwanga kusingadi mari, mafoni edu anga achizadza patinotaura!
Tags: mobile marketingmobile smsSMSsms kushambadzamameseji kushambadzirakutumira mameseji
Patronpath Inotangisa Nyowani Webhu Kuvapo
Mazhinji eBlog Blog Zvangu zviri Verbose
May 3, 2008 pa 11: 58 PM
Ehe, hongu, kunyangwe ndiri mumwe wevanhu vakura kwazvo uye ini ndisingashandisi nhare kunze kwekutumira mameseji - anobatsira senzira yekuremekedza isingade kuti mupi amise basa nekuteerera, ini pandinoziva kuti havasi padhuze neemail mudziyo ...
May 4, 2008 pa 6: 55 AM
Kana kambani yako yakanangisa pane zvemukati mefoni kana IM, iwe waizoda kuti ongororo yako iratidze kushomeka kwekushandisa mameseji. asi nhamba dzichangoburwa kubva kuCTIA, sangano renyika dzese risina tsvete rinoratidza kuti kubva pamamirioni mazana maviri nemakumi maviri nemaviri evaridzi vefoni vekuUS, vanopfuura mamirioni zana nemakumi manomwe nenomwe. Kupfuura 262 paminiti muUS chete.
Kutumira mameseji muUS kuri kukura pamwero we151% pagore, nevane makore makumi matatu kusvika makumi mana nemashanu vachikura pamwero we30%.
Vatatu chete vevatapi vakuru veUS parizvino vanotendera MMS yakawanda uye vazhinji vevatambi vakuru vari kutarisisa kuwedzera kwemusika wavo wekuwana data nekuda kwematambudziko mukuendesa MMS, inova isingasviki 3%.
Dhata yakawanikwa nharembozha ndiyo ramangwana rekushambadzira nhare, asi SMS yekutaurirana kwakachena uye huwandu hwezvishandiso zviripo kuburikidza nerunyorwa zvinoramba zvichikura
Parizvino ingangoita 50% yemafoni eUS ane kugona kwedata asi vangangoita makumi matatu muzana vanobhadhara iyo yekuwedzera mari yekumisikidza chimiro.
May 4, 2008 pa 3: 52 PM
Huru zvimiro, Rbowen! Ndatenda zvikuru nekutora nguva yekugovana zviga izvi. Ndanga ndichikwenya mambure kuti ndione zvandinogona pamusoro wenyaya. Kutumira mameseji zvechokwadi kune buzz, asi zvakadaro zvinoita kunge zvine nzira dzekuenda kunotora kushambadzira kukuru. Zvimwe iri ndiro gore!